Izy moa izay kandida ho filoham-pirenena farany teo ary anton’ny sazy ny famoahana teny tsy voahevitra nahatohina ny maro.
Ry zareo avy eo anivon’ilay fikambanana hetsi-bahoaka ho an’ny tena fanovana sy ny fanorenana ifotony ihany koa dia mitaky ny famoahana ny mpitari-tolon’izy ireo, Pety Rakotoniaina. Hita fa marina, hoy ny solontenan’izy ireo ny fitakian’ity filohanay ity ka tokony havoaka izy.
Heverina fa ho feno tanteraka anio ireo 22 mirahalahy handrafitra ny Barean’i Madagasikara hiatrika an’i Soudan etsy Vontovorona ny alahady izao. Andrasan’ireo mpankafy ny ekipam-pirenen’ny baolina kitra malagasy moa ny fomba filalaon’ilay mpilalaon’ny Olympique Lyonnais, Jérémi Morel.